HEALTH AND KNOWLEDGE Archives - Myannewsmedia
အစားတွေ အများကြီးစားထားပေမယ့် ခဏခဏ ဗိုက်ပြန်ဆာနေတတ်တာဘာကြောင့်လဲ…
September 7, 2019 froze	0 Comments
အစားစားထားတာ မကြာသေးပေမယ့် ဗိုက်ဆာနေတာမျိုး၊ တစ်ချိန်လုံး တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု စားချင်နေတာမျိုးဖြစ်ဖူးပါသလား။ အခုပဲ တစ်ခုခုစားပြီးပေမယ့် အခုပဲဗိုက်ဆာလာတယ်၊ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးစားနေလို့ ဝိတ်တက်မှာလည်း စိုးရိမ်ရတယ်။ ဒါဆို ဘာကြောင့် ဒီလိုမျိုးဗိုက်ဆာရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုသိဖို့လိုလာပါပြီ၊ ဒါမှ အစားအသောက်တွေဆက်တိုက်စားပြီး ဝိတ်တက်လာမှာကို တားနိုင်မှာမဟုတ်လား။
မနက်ခင်းမှာ ဒါတွေလုပ်ပေးရင် ပျော်ရွှင်တက်ကြွတဲ့ တစ်နေ့တာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ…
နေ့တစ်နေ့ရဲ့အစမှာကတည်းက အားအပြည့်နဲ့ လန်းဆန်းနေမှ တစ်နေ့တာ လုပ်ရမယ့်အရာတွေကို အ ကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ တစ်နေ့ချင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်မှ ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့တာလုံး အဆင်ပြေ ပြေဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ မနက်ခင်းတိုင်းလန်းဆန်းတက်ကြွ စေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေကို
မပင်ပန်းဘဲ အညောင်းအညာပြေစေမယ့် နည်းလမ်း (၅)မျိုး
September 3, 2019 froze	0 Comments
အထိုင်များတဲ့သူ၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ဖို့ အချိန်မရတဲ့သူ၊ မအားတဲ့သူ၊ အပင်ပန်းမခံနိုင်တဲ့သူတွေက တခြားလူတွေထက် ပိုပြီးအညောင်းမိတတ်တယ်။ အကြောတက်တာ၊ နေရထိုင်ရပေါ့ပါးလန်းဆန်းမှု မရှိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အညောင်းမိတာများလို့ အကြောတွေတက်ပြီး လေးလံထိုင်းမှိုင်းနေတယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လည်းအချိန်မပေးနိုင်၊အပင်ပန်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက် လုံးဝပင်ပန်းစရာမလိုဘဲအညောင်းအညာပြေမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ခန္ဓာကိုယ်ကို လိမ်ပါ
September 2, 2019 froze	0 Comments
ရာသီလာစဉ် လူသတ်ချင် ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း အမျိုးသမီးတွေ ဓမ္မတာလာစဉ်ခံစားရတဲ့နာကျင်ကိုက်ခဲမှုဝေ ဒနာတွေကြောင့် ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတို့ကြောင့် တွေ့သမျှအရာတိုင်းကို အလိုမကျ ရန်မူလိုခြင်းဖြစ်စေတာပါ။ ဒါကြောင့် အဲဒီလိုနာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာတွေလျော့နည်းသက်သာအောင် ဆောင် ရန် ရှောင်ရန်နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို Aunty May ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁)ကဖိန်းဓာတ်များပြားခြင်း
ခရီးသွားတဲ့အခါ “ကျန်မာရေးဆေးအိတ်” ကို ယူသွားသင့်တဲ့အကြောင်းအရင်း
August 14, 2019 froze	0 Comments
နိုင်ငံရပ်ခြား ခရီး (သို့မဟုတ်) ရက်ရှည် ခရီးတခုခု သွားမယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ တကိုယ်ရည်သုံး ပစ္စည်းတွေအပြင် “First Aid Kit” လို့ ခေါ်တဲ့ ဆေးပစ္စည်းတွေ ပါဝင်တဲ့ ကျန်မာရေးဆေးအိတ် သယ်ဆောင်သွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း
နံနက်ခင်းမှာ စားဖို့ရှောင်ကြဉ်သင့်သည့် အစားစာများ
August 13, 2019 froze	0 Comments
ကွေကာ၊ ဆန်ပြုတ်၊ ပေါင်မုန့်အညို၊ အစေ့အဆန်၊ ပျားရည်တို့က မနက်စာအတွက် သင့်တော်ပါတယ် မနက်စာကို ဘယ်လို အစားအစာတွေ စားလေ့ရှိပါသလဲ။ တချို့အစားအစာတွေက မနက်ဘက် အစာအိမ်ထဲ အစာမရှိချိန် စားလို့ မသင့်တော်တာမျိုး တွေ ရှိပါတယ်။ ဘယ်အစားအစာတွေက
လအလိုက်ခရီးထွက်သင့်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကဒေသများ. (ရှဲပြီးသိမ်းထားပါ)
June 6, 2019 SPACE	0 Comments
လအလိုက်ခရီးထွက်သင့်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကဒေသများ. (ရှဲပြီးသိမ်းထားပါ) ဇန်နဝါရီလ ဇန်နဝါရီလမှာ ခရီးသွားသင့်တဲ့နေရာကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက မြောက်ဦးမြို့ပါပဲ။ မြောက်ဦးမြို့ဟာ ရှေးဟောင်း သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်လည်း အရေးပါတဲ့ နေရာတနေရာဖြစ်သလို ရှုမငြီးနိုင်တဲ့ စေတီပုထိုးတွေကိုလည်း ဖူးမြော်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ
ပေါင်လုံးလောက်ရှိတဲ့မြွေဖြူကြီးကို ချစ်လွန်းလို့ လိုက်ဆွဲမိနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ ရွှေအိမ်စည် ….
အချောလေး ခေးဆက်သွင်ကို ရန်ခုန်စေခဲ့လိုက်တဲ့ စာလေးတစ်စောင် …